दोलखामा आइसियूसहित ५५ शैया क्षमताको अस्पताल - bampijhyala.com
Home > दाेलखा समाचार > दोलखामा आइसियूसहित ५५ शैया क्षमताको अस्पताल
१२ असार २०७८, शनिबार ०९:०२ bampijhyala
बाँपीझ्याला, दोलखा । दोलखा जिल्ला ऐतिहासिक शहर भीमेश्वर नगरपालीका वडा नंं.– २ दोलखामा निर्माणाधिन अत्याधुनिक सेवा सुबिधासहित को आइसियूसहित ५५ शैया क्षमताको अस्पताल निर्माण भएको छ । यस गौरीशंकर सामुदायिक जनरल अस्पतालले गत बर्ष देखी सेवा दिदै आएको छ ।
यस अस्पतालमा आइसियूसहित ५५ शैया क्षमता रहेको छ । धुलिखेल अस्पतालको व्यवस्थापकिय सहयोगमा सञ्चालनमा आईरहेको उक्त अस्पतालका व्यवस्थापक रोशन महतोले बताउनु भयो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत धुलिखेल अस्पतालको व्यवस्थापनमा सो अस्पताल निर्माण भएको हो । नेपाल छारेरोग संघ दोलखाले सञ्चालन गर्दै आएको गौरीशंकर सामुदायिक जनरल अस्पताल विगत दुई वर्षदेखि धुलिखेल अस्पतालले व्यवस्थापन गरी शुरु गरे संगै उक्त अस्पताललाई अत्याधुनिक प्रविधिको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुविधा सम्पन्न भवनमा बिरामीको उपचार सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
धुलिखेल अस्पतालको समन्वयमा नेपाली मेड लक्जम्बर्ग नामक संस्थाले झण्डै ७ करोडको लागतको सहयोगमा आइसियुसहित ५५ शैयाको अस्पताल भवन निर्माण पश्चात सेवा दिन थालेको हो । २८ नोभेम्बर २०१७ बाट क्षुम गणेश कन्ट्रक्सनले निर्माण थालनी गरेको भवन निर्माण निर्धारित लक्ष्य अनुसार नै सकेको व्यवस्थापक महतोले जानकारी बताउनु भयो ।
व्यवस्थापक महतोले अस्पताल भित्र राखिने अत्याधुनिक प्राविधिका उपकरणहरु खरिद गरी ल्याइ बिरामी को उपचार समेत गरिरहेको जानकारी दिए । उनले आइसियु सहितको सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक उपकरण विदेशबाट ल्याउइएको हुँदा अब दोलखाका बिरामी आइसियु खोज्न राजधानी नै पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको वहाँले बताउनु हुन्छ ।
नेपाल छारेरोग संघका कार्यकारी निर्देशक डा. हेमु राजभण्डारीले अब दोलखामा धुलिखेल अस्पतालकै जति सेवा प्रवाहा हुने बताए । उनले अस्पताल सुरु गर्दाको क्षणलाई सम्झिदै दोलखालीका लागि यो अस्पताल सञ्जिवनी हुने विस्वास व्यक्त गरे । डा.राजभण्डारीले भने ‘सुरुवाती दिनमा हामिले हदैसम्मको दुख गरेका थियौं, अब दुःखका दिन गए’ । उनले आइसियु सहितका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरु सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन् । यता व्यवस्थापक महतोले धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरुनै रोटेसनमा दोलखा खटिने र सोही अनुसारको सेवा प्रवाह हुने बताएका छन् ।
व्यवस्थापक महतोका अनुसार ५५ शैयाको अस्पतालमा आइसियु, अप्रेसन थ्रियटर, सुत्केरी कक्ष, अल्ट्रासाउण्ड, बच्चा राख्ने आइसियु, एनआइसियु लगाएतका कक्षहरु हुने बताएका छन् । अस्पतालमा एक जना एमडिजिपी डाक्टर सहित कन्सलट्यान्ट, ३ जना मेडिकल डाक्टर अन्य आबश्यक चिकित्सकहरु रहने प्रारम्भिक सम्झौतामा उललेख छ । आइसियु सहित विशेषज्ञ डाक्टर र धेरै रोगको सहज उपचार हुने अस्पताल जिल्लामानै सुरु भए पछि जिल्लावासीहरु अत्यन्तै हर्सित भएका छन् ।
यस बारेमा भीमेश्वर नगरपालिका वडा न. –२ का वडाअध्यक्ष बिराजमान श्रेष्ठले दोलखाको स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकतालाई यस अस्पतालले धेरै सेवा पू¥याउँर्दै आएकोमा खुसी व्यक्त गर्नु भयो । यसै गरी अवका दिनमा नागरिकहरु संग पैसा खल्तीमा हुँदा हुर्दै पनि अस्पतालमा उपचारको सुविधाले प्राण त्याग्नु पर्ने दिन गएको सुनाउदै स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणका लागि सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नु भयो ।
मेलम्चीमा रातिदेखि निरन्तर वर्षा, आज तीन तले घर ढल्यो
काँग्रेसमा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ४ लाख ४३ हजार क्रियाशील सदस्य थपिए १२ असार २०७८, शनिबार ०९:०२
७० वर्षीय गन्धर्व १३ वर्षको उमेरदेखि सारङ्गी रेट्दै १२ असार २०७८, शनिबार ०९:०२
कस्तुप र देवीको तीज गीत ‘तिम्रो फोटो आँखैमा’ १२ असार २०७८, शनिबार ०९:०२
सोङ्गुकिपा ‘प्रेमनाथ’ डिजिटलकु खोईदउ जुर १२ असार २०७८, शनिबार ०९:०२
वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायल जान अनलाइन आवेदन खुल्ला १२ असार २०७८, शनिबार ०९:०२